Barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo si xamaasad leh uga socda Radio Daljir iyo natiijada tartamadii xalay. – Radio Daljir
Bossaso, Aug, 10 – Barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo ay ku tartamaan dugsiyada sare ee ku yaalla deeganada Puntland ayaa si xiiso badan uga socda Radio Daljir, waxaana xalay foodda is daray dugsiyada Sare ee Bossaso Secondry iyo dugsiga As-har Shariif ee Qardho. Kuwaas oo ku tartamay qaybta hore ee barnaamijka kuna wada jira (group-ka C) waxaana 11 iyo 8 buundo ku badiyey dugsiga Bossaso Secondry. Waxaa uu sidaas Bossaso secondry ku helay 3 dhibcood halka As-har Shariif uusan waxba helin.
Sidoo kale waxaa iyaguna qaybtii dambe ee barnaamijka ku loolamay dugsiga Al-waaxa Garoowe iyo Gaarisa Bossaso oo iayguna ku wada jira (Group-ka D) waxaana 12 buundo ku badiyey dugsiga Al-waaxa ee magaalada Garoowe, halka Gaarisa Bossaso uu helay 8 buundo. Waxayna taasi u dhigantaa in dugsiga Al-waaxa uu helay 3 dhibcood Gaarisa Bossaso-na uusan waxba helin.
Tartanka ayaa hadda ku jira wareegga koowaad ee isreeb-reebka waxaa dugsiyada xalay tartamay ay horay u soo tartameen min hal jeer waxaana u dhimman min hal jeer oo kale, waxaana group walba ka soo bixi doona laba dugsi ee ugu dhibcaha bata.
Barnaamijkan oo qabashadiisa ay iska kaashanayaan shirkadda isgaarsiinta ee Golis, wasaaradda waxbarashada ee Puntland, Daladda waxbarashada ahliga ah ee Puntland iyo Radio Daljir ayaa ah kan ugu ballaaran ee ka socda deegaanada Puntland, waxaana si toos ah looga socdaa dhammaan meelaha laga dhagaysto Radio Daljir. Waxaana ka qaybgalaya 24 dugsi sare oo ku kale yaalla magaalooyinka Bossaso, Carmo, Ufayn, Baran, Qardho, Garoowe, Burtinle, Galkacyo iyo Buuhoodle.
Caawana waxaa barnaamijka ku hardami doona dugsiyada Al-najax Bossaso iyo Sh. Cismaan Qardho oo ku wada jira (Group-ka E) iyo Al-Muntadda Burtinle iyo Al-nawaawi Garoowe oo ku wada jira Group-ka F, waxaynuna ka war sugi doonaa natiijada tartanka caawa.